Maxay Bruno Fernandes Iyo Rashford Sameeyeen Markii La Shaaciyey In Manchester United Heshiis La Gaadhay Donny van de Beek? - Gool24.Net
Maxay Bruno Fernandes Iyo Rashford Sameeyeen Markii La Shaaciyey In Manchester United Heshiis La Gaadhay Donny van de Beek?
August 31, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Bruno Fernandes ayaa ka falceliyey saxeexa cusub ee Manchester United ee Donny van de Beek oo £40 milyan oo Gini kaga soo iibsadeen kooxda reer Netherlands ee Ajax.
Manchester United ayaa heshiis shaqsi ah la gaadhay Van De Beek, sidoo kalena kooxdiisa Ajax ayay hore usii gaadheen isfaham dhinaca qiimaha ah, waxaana kaliya hadhsanaa in kubbad-sameeyahan uu ogolaado qodobbada lagu qorayo qandaraaska uu ugu wareegayo Old Trafford.
Donny van de Beek oo ay da’diisu tahay 23 jir waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda khadka dhexe ee farta lagu fiiqo waqtigan, waxaana horyaalka Premier League ay wacdaro ka wada dhigi doonaan Bruno Fernandes iyo Paul Pogba oo ay wadaagi doonaan khadka dhexe ee Manchester United.
Dukaamada lagu iibiyo dharka ayaa durba ay jamaahiirta Manchester United ka raadinayaan haddii ay soo gaadheen garamada uu xidhan doono Van de Beek iyo arrinta ugu weyn ee ay u dheg taagayaan oo ah lambarka uu u xidhan doono kooxda.
Dadka isticmaala Photoshop ayaa illaa xalay baraha bulshada kusoo bandhigayay garanka Manchester United oo dhabarka ay kaga xardhan yihiin Van De Beek iyo lambarro kala duwan oo qaarkood ay haddaba haystaan ciyaartooyo wali aan ka bixin Old Trafford iyo kuwo madhan oo aan xili ciyaareedkii tegay cidi xidhanin.
Kooxo badan oo ay ku jiraan Barcelona, Real Madrid iyo Tottenham ayaa xiisaynayay saxeexa Donny van de Beek, waxaase markii lagu dhawaaqay heshiiskiisa baraha bulshada kaga falceliyey dad kala duwan oo uu ugu magac weyn yahay Bruno Fernandes.
Warka heshiiska Manchester United la gashay Van De Beek oo lagu daabacay barta Instagram ayaa waxa markiiba ka falceliyey Fernandes oo muujiyey sida uu uga helay, waxaanu saaray calaamadda ‘Like’.
Waxa kale oo falcelin doocan oo kale ah bixisay xaaska uu qabo Van de Beek iyo difaaca Manchester United ee Timothy Fosu-Mensah.
Marcus Rashford ayaa isagu qaaday tallaabo ka duwan midda Fernandes iyo Fosu-Mensah, waxaana warkii degdegga ahaa ee heshiiska Van de Beek ee uu bartiisa bulshada ku daabacay wariye Fabrizio Romano markiiba sii share gareeyey weeraryahanka reer England ee Rashford.